मिसावट कहाँ हुदैन र ? « paniphoto
« ‘म बाँच्छु, मलाई अस्पताल लग’ भन्दा-भन्दै पनि ढिलो गरिएछ ! तस्विर हेर्नुहोस्, भावना पोख्नुहोस् »	मिसावट कहाँ हुदैन र ?
By -पानीफोटो- on Saturday September 24, 2011	-गोपाल झापाली-मिसावट कहाँ हुदैन र ? घिउमा आलु र पिडालु । दुधमा पानी । खुर्सानीको धुलोमा ईटको धुलो । दहिमा मोहि । जहीँ पनि मिसावट । वास्तवमा मिसावटको चलनले गरि खान नसक्नेहरुलाई खाएर गर्न खुब सजिलो बनाईदिएको छ । बुद्घीरत्नलाई चामलमा गेग्र्यान मिसाउन होस वा बुद्घीमायालाई तेलमा काति मिसाउन,दैवले दिएको धुत्र्याई चाहि अपरम्पार मान्ननु पर्छ । खसि काट्नेकी बाठी बुढीले पाठीको मासु बेचे पनि कसैले थाहा पाउ“दैन । रत्नपार्कमा फूलको सुवाश लिन सा“झपख गयो ,छेउको ढलबाट आएको बिसाक्त दुर्गन्धको मिसावटले ना“कै भा“चिएला जस्तो पार्छ । फेरि शौच गर्न शहरिया शौचालय पस्यो अनेकका बजारीया अत्तरका बास्नाले त्यहि सुतौं सुतौं जस्तो । क्या मज्जाको मिसावट ।
गा“उबाट राम्रा मतिको मान्छेलाई नेता बनाएर पठायो,राजनीतिको हावाले उसको मतिमा कति छिटो मिसावट गर्छ गर्छ ।मान्छेलाई पनि जन्तु जस्तो बनाईदिन्छ,बर्षैदिन नपुगि । बाउ आमाले कति धपेडि गरेर छोरो हुर्काउ“छन् । १६ कटे पछि छोरोलाई कति छिटा, कति छिटो कुस¨तको मिसावट हुन्छ भने सा“झ बिहानै मुखमुखै लागेर मर्नु पार्छन् ।छोरीहरु पनि उस्तै । कलेज जाने बेलामा द¨यार पैसा माग्यो अनि राति बा आमा निदाएको गम पायो कि शिरिकभित्र गुटमुटिएर खुसुखुसु मोवाईलमा पैसा नसकिएसम्म को स“ग के बात मार्छन कुन्नि ?भोलि पल्ट बिहान कलेज जाने बेला भयो कि उहि बाहाना ,टिफिन खर्च चाहियो । प्रबिधिको दुरुपयोग गर्ने बानिको मिसावट एक्काईसौं शताब्दिको ।सरकारी कार्यालय गयो,उस्तै मिसावट । मंशीरमा फलेको धानमा भुस जस्तो सेवामा घुस मिसावट ।
बगैचा हुन लाई पनि त मिसावटनै चाहिन्छ । गुलाबको,सुनाखरीको,चमेलीको,सयपत्रीको, मखमलीको मिसावट । यि सबैको मिसावट भएन भने त कहा“ फूलबारी बन्छ र । गुलाबै गुलाबको फा“ट त जंगल बन्छ,झाडी बन्छ गुलाबकै । त्यो कहा“ फूलबारी बन्छ वा कहा“ बगैचा बन्छ । आखिर मान्छे रमाउने पनि त फूलबारीमानै त हो ,बगैंचामानै हो ,जंगल भन्दा बढि । मान्छे मात्रै कहा“ हो र । चरा ,पुतली,भ“वरा र बतास लहसिने पनि बगैंचामानै हो अर्थात मिठो मिसावटमा । जंगल जहा“ मिसावटको महत्व रह“दैन । त्यहा“ त कोमलता नभएका ,मन नभएका र भावना नभएकाहरु मात्र रम्छन् । बाघ र सिंह बनेर । एक्ले ढेडु बनेर । मलाई त लाग्छ ,शृष्टिनै मिसावटमा अडिएको छ । संसार हस्तान्तरण गर्नु पर्ने उत्तराधिकारी पनि मिसावट नभए सम्म पाईदैन । अर्थात शुक्रकिट र डिम्बको मिसावट नभए सम्म । म बाबु हन्छु,आमा हुन्छु भन्नु पनि त एउटा मिसावट परस्त चाहना त हो नि । मादकतापूर्ण आलि¨नको चाहना । त्यो छोटो सन्तुष्टि मिसावटमा पुगेर टुि¨न्छ । अनि पूरा हुन्छ रहर आमा वा बुवा सम्बोधन सुन्ने । जहा“ बाट शुरु हुन्छ प्रकृतीको उत्तराधिकारी निर्माण प्रकृया ।
आखिर जिन्दगीनै एउटा मिठो मिसावट रहेछ, तराईका सडक किनारमा अनेक मसलालाई सा“धेर बनाईएको जिब्रो फड्कारिने चटपटे जस्तै । सुख र दुःखको ,आशु र हा“सोको, प्रेम र घ्रिणाको, मिलन र बिछोडको,प्राप्ति र अभावको अरु अरु यस्तै धेरै कुराको अब्बल मिसावट होईन र ?लखनपुर, झापा
« ‘म बाँच्छु, मलाई अस्पताल लग’ भन्दा-भन्दै पनि ढिलो गरिएछ ! तस्विर हेर्नुहोस्, भावना पोख्नुहोस् »	4 comments to मिसावट कहाँ हुदैन र ?
· जवाफ दिनुहोस्	yo misawat garnelai ani kalo bazari garnelai kada bhanda kada sajaya dina jaruri chha…
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Lok bahadur thapa
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Umesh
· जवाफ दिनुहोस्	jati misawat gare pani vo ni !1
यही Category बाटकटहरे बुढी – कथानक्साको पुरुष – कथागर्मीमा पग्लिँदा वैँशहरुब्यूटिफूलअतृप्त प्यास – कथासेविका – कथास्वार्थी संसार – लघुकथामौन प्रेमी – कथापुस्तकालयको रातो भित्तो – कथामसली भाउजु – कथाOnline Users5 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार